Igwe ihe ntanetị nwere ike ịnweta ihu igwe
Nkọwa:Ụdị Mkpuchi Ụdị Ụdị Ọhụrụ,Cover Cover Amazon,Kasị Mma Ịkpọ Car Key Case
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Igwe ihe ntanetị nwere ike ịnweta ihu igwe
Ihe Nlereanya.: RYHX-cat002
Nkwakọ ngwaahịa: 1 pc na akpa akpa
Ubu oke: 10000000
Ebe Mmalite: shenzhen, guangdong, china
Inye Ike: 1000000
Shenzhen Mara mma Earth Technology Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ nke mara mma na onyinye onyinye ma nwee ahụmahụ afọ 10 na-elekwasị anya n'ịmepụta mkpuchi ụgbọ ala . Ugbu a, anyị enweela ọganihu, rụọ ọrụ nke ọma na nlezianya, ụlọ ọrụ ndị magburu onwe ya na nrụpụta nkà na ụzụ nke mbụ, nke na-enye anyị ohere ịme mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala dị elu . Anyị ji n'aka na ị ga-enwe afọ ojuju maka mkpuchi mkpuchi ụgbọala dịka ụdị ndị a, ụdị mkpuchi ụgbọ ala silicone na logo.
Onye ọ bụla Silicone ụgbọ ala isi cover nwere atụmatụ ndị a:
Ihe mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala Silicone zuru oke nke igodo ụgbọ ala gị . na mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala pvc kwekọrọ na bọọdụ ụgbọ ala na-esonụ, nwee olileanya na ịhọrọ ụdị ndị kwesịrị ekwesị. Anyị nwere uru ọnụahịa nke mkpuchi mkpuchi ụgbọala ma ọ bụrụ na i nwere nnukwu.
mkpuchi mkpuchi ụgbọala ụgbọala silicone adịghị emerụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-ejide ihe mkpuchi mkpuchi ụgbọala Silicone n'aka gị, ọ na-adị nro, dị ụtọ na ìhè. Ị ga-ahụ mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala pvc mgbe ị nwere ya.
Anyị nwere ike ịme ihe ọ bụla na-achagharị agba nke Silicone car key cover dị ka ihe ị chọrọ banyere anyị Ihe mkpuchi mkpuchi silikal.
Ihe mkpuchi mkpuchi ụgbọala nke Silicone nwere àgwà ndị na-adịghị emerụ ahụ, ndị na-anụ ọkụ n'obi na gburugburu ebe obibi, ihe nkwụsị ọkụ, na-adịgide adịgide, mmiri na-adịghị ahụkebe, ihe nkwụ
A na -emepụta mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala Silicone site na-eme ihe atụ maka ịkwado ụji mmiri, usoro niile anyị na-arụ na-arụ ọrụ n'onwe anyị.
1. 1. mkpuchi ọkpụkpọ Silicone ọ bụla n'ime akpa ọkpụkpụ
2. 100pc mkpuchi okpukpu abụọ nke Silicone n'otu katọn
3. ụda nchara: 53 * 26 * 38cm
Jeep wrangler silicone key fob ekpuchi Kpọtụrụ ugbu a
2016 Jeep Ukwu cherokee silicone igodo fob ekpuchi Kpọtụrụ ugbu a
2017 Jeep cherokee silicone igodo fob ekpuchi Kpọtụrụ ugbu a
Chevrolet na-ekpuchi isi mkpuchi igodo Kpọtụrụ ugbu a
Ụdị Mkpuchi Ụdị Ụdị Ọhụrụ Cover Cover Amazon Kasị Mma Ịkpọ Car Key Case Ụdị Ụdị Ụdị Ọhụrụ Ntuchi Ọhụụ Ọhụụ Ọhụrụ Ọhụụ Ọhụụ Ọhụrụ Ọhụụ Ọhụụ Ọhụụ Ọhụrụ Ọkpụrụkpụ Ntugharị Ọgba Ọhụrụ